Tanànan'ny Moyen Âge ao Espaina: Avy any Santillana del Mar ka hatrany Montefrío | News Travel
Louis Martinez | 30/04/2022 19:15 | España, mpitarika
Misy an-jatony tanàna Moyen Âge any Espaina. Tanàna toa nitsahatra izy ireny ary rehefa mitsidika azy ireny isika dia mitondra antsika any amin'ny lasa aristokratika na mahery fo izay nisy azy ireo. manors, fetran'ny sisintany na foibe ara-toekarena lehibe.
Ny fandehanana mamakivaky ny arabe tery misy vatokely, ny fahitana ny tranon'ny razambeny ary ny fitsidihana ireo tsangambato tsara tarehy dia mahatonga anay ho toy ny olona tamin'ny Moyen Âge. Ary ny tsara indrindra dia azonao atao ny mahita azy ireo faritany rehetra any Espainaavy amin'ny Barcelona ny Cáceres ary avy Cantabria ny Malaga. Ho an'izany rehetra izany, manolotra fitsidihana ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Espaina izahay.
1 Santillana del Mar, malaza amin'ireo tanàna Moyen Âge any Espaina
2 Besalú, lova romanesque mahavariana
3 Aínsa, any amin'ny Huesca Pyrénées
4 Frías, tanàna tamin'ny Moyen Âge ao Burgos
5 Albarracín, iray amin'ireo tanàna tamin'ny Moyen Âge tsara tarehy indrindra any Espaina
6 Montefrío, Andalusia tamin'ny Moyen Âge
Santillana del Mar, malaza amin'ireo tanàna Moyen Âge any Espaina
Santillana del Mar, angamba no tanàna tranainy indrindra any Espaina
Manomboka ny dianay any amin'izay mety ho tanàna malaza indrindra amin'ny Moyen Âge eto amin'ny firenentsika. Raha misy amintsika manontany momba ny tanàna tamin'ny Moyen Âge any Espaina, dia maro amintsika no hamaly an'i Santillana del Mar.
Satria, ankoatra izany, dia villa tsara tarehy ao afovoan'ny Cantabria. Tsy very maina fa mitana ny sokajy ny Ensemble ara-tantara ara-javakanto ary ampahany amin'ny tambajotran'ny Ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Espana. Raha ny marina, afaka milaza aminao izahay fa tsy very maina ity tanàna ity. Saika manana zavatra mahaliana avokoa ny tranobe rehetra ao aminy.
Saingy misy maromaro tsy maintsy hitanao. Izany no zava-misy amin'ny mahagaga fiangonana collegiate de Santa Juliana, naorina tamin’ny taonjato faha-XNUMX taorian’ny kanona romanesque, na dia naorina tamin’ny taonjato faha-XNUMX aza. Aza hadino ny mitsidika ny cloister, miaraka amin'ny renivohitra roa amby efapolo. Tena ilaina ihany koa ny mahita ny mahasarika lapan'ny fasika, vatosoa tamin'ny Renaissance tany am-boalohany misy motif plateresque.
Tsy io ihany no trano vakoka hita ao Santillana. Manoro hevitra anao koa izahay hitsidika ny lapan'i Viveda, Mijares na Valdivieso, ary koa ny fananganana ny Town Hall, fomba baroque. Raha fintinina, araka ny voalazanay, dia mahaliana ny tranobe rehetra ao amin'ity tanàna Cantabrian ity. Noho ny tsy fahafahany milaza aminao ny momba ny tsirairay amin'izy ireo, dia manoro hevitra anao izahay mba hijery ny tranon'ny Quevedo sy Cossío, ny Villa, ny Archduchess na ny tilikambon'i don Beltrán de la Cueva, del Merino ary don Borja. Izany rehetra izany tsy manadino ny Altamira Museum, miaraka amin’ny dika mitovy amin’ireo zohy malaza ao aminy.
Besalú, lova romanesque mahavariana
Mandeha any amin'ny faritr'i La Garrocha izahay izao, ao amin'ny faritanin'i Girona, hitantara aminao momba an'i Besalú, tanàna iray hafa tamin'ny Moyen Âge manaitra any Espaina. Efa mitovy ny fidirana amin'ny villa, miaraka amin'ny Puente nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia mahatalanjona. Mirefy dimy amby zato metatra ny halavany ary na izany aza dia naverina tamin'ny laoniny imbetsaka. Misongadina ny tilikambony telo. Ny roa dia eo akaikin'ny rindrina ary ny fahatelo, hexagonal ary telopolo metatra ny haavony, eo afovoany.
Besalú koa Ensemble ara-tantara ara-javakanto. Ary misy mahaliana ampahefatry ny firavaka lalana tery izay mbola ahitanao ny sisa tavela tamin’ny synagoga taloha sy ny miqveh, toerana nanaovana ny fombafomba fandroana. Ho azy, ny monastera ao Sant Pere Naorina tamin’ny taonjato faha-XNUMX izy io, na dia ny tempoly sisa aza ankehitriny. Ary, eo amin'io kianja io ihany, manana ny trano Cornellà sy ny tranainy ianao Hopitaly Sant Julia, miaraka amin'ny façade avy amin'ny XII.
La fiangonan'i San Vicente Vato romanesque tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary, ivelan'ny rindrina, dia hitanao ny sisa tavela amin'ny lapa sy ny fiangonan'i San Martín. Saingy tianay ihany koa ny hanoro hevitra anao amin'ny zavatra izay mety tsy hiseho amin'ny mpitari-dalana mpizahatany mahazatra. Koa satria any Besalú ianao dia tongava Castellfullit de la Roca, tanàna tsara tarehy tamin'ny Moyen Âge na dia kely kokoa aza ary toa mihantona amin'ny hantsana mivaingana.
Aínsa, any amin'ny Huesca Pyrénées
Plaza Ben'ny tanànan'i Ainsa
Ny iray amin'ireo tanàna medieval tsara tarehy indrindra any Espaina dia Aínsa, any amin'ny faritr'i Sobrarbe ao amin'ny faritanin'i Espaina. Huesca. Ho an'ny hatsarany ara-tantara dia manampy zavaboary manan-danja izy io, satria ny ampahany amin'ny faritra monisipaly dia tafiditra ao amin'ny kanto. Valan-javaboarin'ny Sierra sy ny Guara Canyons.
Noho izany, amin'ny Moyen Âge isika dia afaka mihevitra an'i Aínsa fa ny angano dia nametraka ny fototra tamin'ny taona 724 noho ny fahagagana tamin'ny hazo fijaliana afo. Araka ny filazany, noho ny fisehoan'io singa mihoatra ny natoraly io dia afaka nandresy ny silamo ny miaramila kristiana Garci Ximénez. Efa tamin`ny taonjato fahafito ambin`ny folo naorina tempoly misy hazo fijaliana ao anatiny mba hahatsiarovanao ity tantara ity izay mbola hitanao ankehitriny.
Fa ny mariky ny Aínsa lehibe dia ny azy lapan'ny, naorina tamin'ny taonjato faha-1931. Io no tena niandohan’ilay tanàna, satria avy tao no nanitatra ny manda mba hiarovana an’ireo nanorim-ponenana teo amin’ny manodidina. Nanomboka tamin'ny XNUMX dia tsangambato ara-tantara ara-javakanto.
Manoro hevitra anao koa izahay mba hijery ao amin'ny tanànan'i Huesca ny fiangonan'i Santa Maria, naorina teo anelanelan’ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX taorian’ireo kanôna romanesque. Ny vavahadin-tserasera misy archivolts efatra sy ny nave tokana voarakotra amin'ny vatam-baravarana antsasaky ny barika dia miavaka amin'ny fahatsorany, fa, ambonin'ny zavatra rehetra, ny tilikambo, manana refy miavaka amin'ny Romanesque Aragonese.
Aza adino ny mandalo, koa, ny tsara tarehy Kianja lehibe, misokatra sy miaraka amin'ny arcades, ary tsy mahita ny trano Arnal sy Bielsa, izay samy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Saingy, ambonin'ny zava-drehetra, mandehana mamakivaky ireo arabe tery misy vatokely toy ny tamin'ny Moyen Âge ianao.
Frías, tanàna tamin'ny Moyen Âge ao Burgos
Fijerena an'i Frías, vatosoa tamin'ny Moyen Âge ao amin'ny faritanin'i Burgos
Miaraka amin'ny mponina latsaky ny telonjato, dia ho gaga ianao raha mahafantatra fa ity tanàna ity ao amin'ny faritanin'i Burgos mitana ny lohatenin'ny tanàna nomen’ny mpanjaka John II avy any Castile tamin'ny 1435. Izany dia hanome anao ny hevitry ny maha zava-dehibe ny Moyen Âge.
Ny iray amin'ireo tandindona lehibe dia ny mahavariana tetezana romanesque nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay, izay efa ho dimampolo amby zato metatra ny halavany, dia anisan'ny lava indrindra any Espaina. Ny fanavaozana taty aoriana dia nanampy ireo singa Gothic toy ny sasany amin'ireo andohalambony, izay misy teboka. Taty aoriana koa dia ny tilikambo afovoany izay mandravaka azy.
Saingy, angamba, ny tena mahasarika an'i Frías dia ny azy trano medieval. Ny sasany amin'izy ireo, toa an'ireo ao Cuenca, dia toa mihantona amin'ny havoana iray eo amin'ny lalana mitambatra fiangonan'i San Vicente ary ny tranoben'ny Velasco. Ity farany dia satroboninahitra, indrindra indrindra, ny havoanan'i La Muela ary efa voasoratra tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia tamin'ny faha-XNUMX aza ny volavolan-dalàna ankehitriny. Ny toerana misy azy sy ny habeny dia nanome azy io ho fiarovana tsy azo lavina ho an'ny faritra.
Raha ny amin'ny fiangonan'i San Vicente Mártir sy San Sebastián voalaza teo aloha, dia tsy mitahiry singa sasany amin'ny endriny romanesque tranainy izy io. Niharan'ny loza isan-karazany izay nanery ny ampahany maro hamboarina. Toy izany koa, nentina tany amin’ny Tranombakoka Cloisters any New York ny fonony taloha.
Tokony hahita tsangambato ara-pivavahana hafa any Frías koa ianao, toy ny tranoben'i San Francisco sy Santa María de Vadillo, ary koa ny fiangonana gothic ao San Vítores. Ary, momba ny sivily, manoro hevitra anao izahay hitsidika ny trano sy lapan'ny Salazar. Izany rehetra izany dia tsy nanadino ny faritra jiosy, izay teo amin'ny araben'i Convención sy Virgen de la Candonga ankehitriny.
Albarracín, iray amin'ireo tanàna tamin'ny Moyen Âge tsara tarehy indrindra any Espaina
Miverina amin'ny vondrom-piarahamonina mizaka tena an'ny Aragon, indrindra ho an'ny faritanin'i Teruel, mba hitantara aminareo momba an'i Albarracín, izay tombanana manodidina ny taonjato faha-XNUMX ny fototra iorenany, fony nisy andiana silamo nipetraka tao. Ho an'izany dia nanorina trano mahafinaritra izy alcazar izay tsangambato ara-tantara ara-javakanto ankehitriny.
Na izany aza, ny tanàna manontolo dia manana ny anaram-boninahitra hoe complex monumental manan-tantara. An'ny vanim-potoana silamo koa ny tilikambo mpandeha an-tongotra, izay anisan’ny manda niaro ny tanàna. Mifanitsy amin'izany ny tilikambon'i Doña Blanca, izay eo amin'ny faran'ny valan-javaboary.
Ary eo akaikin'ny lapa dia manana ny katedraly mpamonjy, naorina tamin’ny taonjato faha-XNUMX teo amin’ny sisa tavela tamin’ny tempoly romanesque tranainy tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia manambatra ny fomba Gothic, Renaissance ary Baroque. Koa, ao anatiny, dia afaka mahita mahaliana fanangonana ny Flemish tapestries.
Eo akaikin'ny katedraly no misy ny Lapan'ny episkopaly, miaraka amin'ny façade baroque mahaliana, ary, ao amin'ny antsoina hoe Portal de Molina, ny trano Julianeta, fanorenana malaza mahazatra. Farany, ny Town Hall Efa tamin’ny taonjato faha-XNUMX izany.
Montefrío, Andalusia tamin'ny Moyen Âge
Montefrío, iray amin'ireo tanàna tamin'ny Moyen Âge tsara tarehy indrindra any Espaina
Ao amin'ny faritanin'i Granada, Montefrío dia nanana lanjany lehibe tamin'ny Moyen Âge Al Andalus. Raha ny marina, ny trano mimanda dia nisy ny kianjan'ny Nasrid mpanjaka Ismail III. Io fiarovana io dia miorina eo amin'ny havoana manaitra izay misy ihany koa ny fiangonan’ny vohitra, naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny Diego de Siloama.
Tsy io ihany anefa no hitanao any Montefrío. Ankoatra ny fandehanana eny amin'ny arabe sy ny fijerena ireo trano fotsy, dia tokony hitsidika ny tontolon'ny Cerro de los Gitanos ianao, izay misy toerana arkeolojika maromaro ary na dia tanàna sy tetezana romanina aza. Ary ao amin'ny Barranco de los Molinos dia hahita riandrano sy, indrindra indrindra, fikosoham-bary avy amin'ny vanim-potoana latinina.
Toy izany koa, tsy maintsy mitsidika an'i Montefrío ianao, izay nambara ihany koa Ensemble ara-tantara ara-javakanto, ny fiangonan'i San Sebastián sy San Antonio, ny Renaissance voalohany ary ny Baroque faharoa. Amin'ny lafiny iray, ny an'ny Fahatongavana ho nofo dia neoclassical. Ho an'ny ampahany, ny Tranon'ny varotra ary ny Hopitaly San Juan de Dios izy ireo dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny Lapan'ny tanàna dia trano lehibe tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany amin'ireo manaitra indrindra tanàna Moyen Âge any Espaina. Na izany aza, tsy azo ihodivirana, maro no navelanay ho ao anaty fantsona. Raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy dia holazainay aminao Alquezar any Huesca, peratallada any Girona, Ronda any Malagasy na Olite any Navarre. Mandehana mitsidika azy ireo fa tsy hanenenanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Tanànan'ny Moyen Âge any Espaina
Torapasik'i Puerto de Santa Maria